Dhageyso: Madaxweynaha oo si carro leh uga hadlay dagaallada Sh/Hoose - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Madaxweynaha oo si carro leh uga hadlay dagaallada Sh/Hoose
Dhageyso: Madaxweynaha oo si carro leh uga hadlay dagaallada Sh/Hoose
Muqdisho (Caasimada Online) Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo goordhow shir jaraa’id ku qabtay Villa Somalia ayaa si kulul uga hadlay dagaalada ka socda deeganno hoos-taga gobalka Shabeellaha Hoose.
Madaxweynaha ayaa marka hotte ka tacsiyeeyay dagaalada ka dhacay gobalka, wuxuu shegeay in ay nasiib daro ay tahay dagaalada ka soo cusboonaaday Shabeellaha Hoose.
Xasan Sheekh oo u hanjabay kooxoaha uu ugu yeeray qaswadayaasha.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in ay jiraan kooxo ka faa’iideysanaya collaadaha oo sii horinayo, ujeedadooduna ay tahay in la wiiqo horumarka nabadeynta ee dowlad dhisidda, laakin wuxuu yiri kooxahaas bir adag ayaan kula dhaqmi doonaan
Madaxweynaha ayaa ugu danbeyntii u diray baaq Odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada, ururada bulshada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada inay mas’uuliyad gaar ah iska saaraan joojinta dagaalada iyo collaadaha oo ay dowladda kala shaqeeyaan nabadeynta, fududeynta wadahadalka iyo dib-u-heshiisinta ka socota deegaanada dagaaladu ka dhaceen. Sidoo kale shacabka waxaan ka codsaneynaa inay dowladda la shaqeeyaan oo qaswadyaasha aan meel uga soo wadajeesano, bacdamaa ay diidan yihiin in dalka uu ka hirgalo dowladnimo, kala danbeyn iyo sharci.
Halkan ka dhageyso hadalka Madaxweynaha